Ny Valosoa Vaovao, 26 Oktobra 2017. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Fats Domino 26/02/1928 – 24/10/2017.
« Ho anao ry olona iny », Sedera Ravalison. →
Ny Valosoa Vaovao, 26 Oktobra 2017.
Publié le 28 octobre 2017 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Nahazo tohana avy amin’ny TIM any ivelany ny CUA
Nanaovana fanandramana omaly teo amin’ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo ny fiara-vaventy Actross vaovao, fiara mpanadio manara-penitra, manaraka ny teknolojia vaovao, hoentina hampiasaina hanadiovana ny Renivohitr’i Madagasikara. Teny amin’ny faritr’Ambohidahy, nihazo ny kianja mitafon’i Mahamasina no naseho izy io. Fiara-vaventy ari-fomba sy manaraka ny teknolojia ity fiarakodia ity .
Sady mamafa, manasa, ary mamendraka fanafody ilay izy. Ny kaominina Antananarivo-Renivohitra no mampiasa azy, ary hiantoka ihany koa ny famafana lalana sy ny fikajiana ny fahadiovana isaky ny Boriboritany 6. Nanatrika io fanandramana voalohany io ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy akaiky, teo ihany koa ny mpanolotsaina manokana, Marc Ravalomanana, sy ireo depiote eto an-drenivohitra. Anisan’ny niara-niombon’antoka amin’ny fahazoana ity kamiao ampiasain’ny CUA ity ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any ivelany, anisan’izany ny TIM Frantsa, nanampy koa ireo mpiara-miombon’antoka hafa na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Fitaovana manarapenitra sy manaraka ny teknolojia ity kamiao Actross ity izay nanao ny fanadiovana lehibe, nanala ny vovoka sy mitroka fako ary nandraraka ny fanafody HTH, ary ny fanasana tamin’ny rano no nataon’ny mpamonjy voina.
Nanambara ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana fa efa nisy ireo mpanadio rehetra hatramin’izay fa mila atao mafimafy kokoa ny fanadiovana manomboka izao , indrindra amin’ny fisian’ny valan’aretina pesta, ka izay no anisany nanafarana sy nangalana ity kamiao manara-penitra ity ho entina hanadiovana ny boriboritany rehetra ; nilaza koa izy fa mila miezaka tsara ny fakana ireo hetra eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ary entanina koa ny olona mba handoa izany ara-dalàna satria mbola mieritreritra ny Ben’ny tanàna fa tokony hanana kamiao manarapenitra 2 isaky ny Boriboritany ny CUA. Marihana fa ny tanjona amin’ny fanadiovana dia fanafoanana ny valan’aretina sy ny fanadiovana ny tanàna ary tokony tsy hisy intsony izany indrindra raha afaka tanteraka ny fako tokony hesorin’ny SAMVA. Nanambara koa ny mpanolotsaina manokana Marc Ravalomanana fa ao anatin’ny iray volana dia efa madio tanteraka Antananarivo amin’ny fampiasana ity fitaovana manara-penitra ity.
Nahita ireo taxi dia mino ny OMAVET
Nihaona tamin’ny Mpanolontsaina manokan’ny Ben’ny Tanàna Marc Ravalomanana sy ireo olomboafidy sasantsasany eto Antananarivo ary ny mpiaramiasa akaiky amin’ny Ben’ny Tanàna omaly tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ireo mpamily Taxi vonona hiara-hiasa sy hanaraka ny fandaminan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) . Nilaza ireto Taxi ireto fa tsapany sady hitan’ny masony ny tolotra omen’ny Omavet amin’ny Visite de Conformité ka izany no naharesy lahatra azy ireo: “nahita izahay dia mino ny OMAVET”, hoy izy ireo.
Ny Mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanàna Marc Ravalomanana kosa no nanambara fa matoa atao manaraka ny tokony ho izy ny tontolon’ny Taxi dia noho ny fahatsapana fa ain’olona no hoentina ; soso-kevitra no atolotro hoy izy fa anjaran’ny Kaominina no manapa-kevitra araka izay fantany fa mety . Ankoatra izay dia nilaza ny mpamily Taxi tonga nifampidinika tao amin’ny Lapan’ny Tanàna fa rahonan’ny FTAR ny naman’izy ireo. Izany FTAR izany anefa dia tsy mahasolotena velively ny Taxi rehetra eto Antananarvo Renivohitra ; ankoatra izay dia nanome toky ireo Mpamily Taxi ny Tale Jeneralin’ny Omavet, kolonely Rabezandry fa hiezaka hanome tolotra tsara , tsy misy koa ny fanilikilihana . Fantatra fa mbola hisy ny fihaonambe iarahan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny fianakaviamben’ny Taxi etsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely anio alakamisy 26 Oktobra 2017.
Tsiahivina fa talohan’ity fihaonana teny amin’ny Lapan’ny Tanàna ity dia tonga teny amin’ny Foiben’ny OMAVET Nanisana ny talata teo tolakandro ireo solonten’ ny mpamily Taxi maromaro nanatontosa dinidinika niaraka tamin’ny Tale Jeneralin’ny OMAVET, kolonely RABEZANDRY. Maro ny fanontaniana napetraky ny Taxi mba hialana amin’ny ahiahy isankarazany . Mbola nitondrana fanazavana ohatra ny 104 points izay nampisavorovoro tany aloha . Nohamafisina ary fa tsy mitombina io resaka io. Nanontany koa ireo Taxi momba ny tombontsoa azon’izy ireo amin’ny fitsirihana eny amin’ny OMAVET ary anisan’ny voalaza amin’izany ny fanafoanana ireo tsy ara-dalàna, fanatsarana, tsy misy ny risoriso, fanamboarana fiara amin’ny vidiny mirary sy vidina kojakoja mora. Nohamafisina fa tsy miova ny vola aloha amin’ny fitsirihana fa 5 000 AR ihany ary 3 000 AR kosa ny fanafody HTH izay toy ny teny Antsakaviro ihany. Ny Droit de stationnement kosa dia eny anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no aloan’ireo Taxi madiodio . Ankoatra izay dia tsy nanafina ny ahiahiny ireo Taxi raha toa ka tsy lany ny fiaran’izy ireo mandritra ny fitsirihana . Nanambara avy hatrany ny Tale jeneralin’ny OMAVET fa tsy misy fanilihana ireo fiara tsy lany fa fanampiana ny Taxi no hatao raha mitranga izany toe-javatra izany toy ny fanamorana ny kojakojan’ny fiara , ny loko sy ny tontolon’ny mekanika isankarazany ary misokatra hatrany ny fifampiresahana ho an’ireo sahirana. Marihana ihany koa tsy tery ny fanamborana ny fiara ao amin’ny OMAVET hoy ny Tale jeneraly . Nohamafisina fa mahazo tombontsoa ny Taxi manao fitsirihana ao amin’ny OMAVET araka ny efa naverimberin’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana teny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely .
Ny tapany faharoa kosa dia nisy fitsidihana ny toerana fanaovana ” Visite de conformité” an’ireo taxi ville teny amin’ny OMAVET sy ireo toerana fanamboarana fiara maro samihafa. Raha nanontaniana ny vokatry ny fihaonana ireo solontenan’ny taxi dia nanambara izy ireo fa nahazo fanazavana tsara mikasika ny fitsirihana sy ny paikady eo anivon’ny OMAVET sy Taxi ville ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ; afaka noho izany ny ahiahy mitambesatra hatramin’izay amin’ireo hevitra tsy mitovy. Noho izany dia manentana ireo namany rehetra ny solontenan’ny taxi hanao ny fitsirihana eny amin’ny OMAVET .
Ankarihary momba ny OMAVET
Namoaka gazety ny mpanao taxi: gazety Gaze T’axi
Ialana amin’ny honohono sy ny lainga afafy etsy sy ero ataon’ireo fikambanana Taxi, FTAR tarihin’i Clemence Raharinirina dia namoaka gazety ampahafatarana mikasika ny OMAVET sy ny manodidina azy ny mpikirakira ny fitaterana Taxi eto Antananarivo renivohitra izay aparitaka amin’ireo taxi miasa rehetra . Hita ao anatin’ny lahatsoratry ny gazety ny fanazavana rehetra mikasika ny zavatra mampiahiahy ny taxi, ary misy valiny mahafapo avokoa. Taterin’izy ireo amin’izany koa ny fihaonana farany teo amin’ny CUA notarihan’ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana sy ireo mpanao taxi tsy ankanavaka. Fantatra fa mbola hihaona indray anio alakamisy 26 oktobra etsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely, ireo mpanao taxi sy ny CUA, ao anatin’ny fanatsarana hatrany ny asan’ireto mpamily fiara karetsaka ireto. Helisoa
Misavoritaka tanteraka ny fitondrana
Misavoritaka tanteraka ny fiakaviamben’ny fitondrana ankehitriny raha ny fahitana azy avy ety ivelany satria tsy hita izay fandrosoan’ny firenena kanefa efa hifarana ihany ny fotoam-piasan’izy ireo . Atao ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana fa eee ! Atao ny ady amin’ny pesta fa mihamitombo ihany ny maty , lazaina fa mitsinjo vahoaka ny fitondrana kanefa ny iray kilao amin’ny vary aza efa 2 000 AR mahery, dia hoy ny maro manao hoe : fa inona marina no atao hoe fanjakana ? Toa tsy misy mpiahy ilay vahoaka nakana vato tamin’ny fifidianana .
Fa ny tena manahirana dia ny miasa sy ny miezaka mampandroso indray no sakantsakanana kanefa ny sasany tsy hanao na inona na inona. Raha raisina ohatra ny resaka Taxi eto Antananarivo dia tsy tokony hisy olana mihitsy ny fandaminana ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra satria fanatsarana no atao ary izay indrindra no antony nifidianan’ny vahoaka ny Ben’ny Tanàna ; tokony ho tsapan’ny sasany fa tsy izay mpitarika fikambanana Taxi FTAR izay tsy afaka hilaza fa mahasolotena ny taxi rehetra eto Iarivo akory no hibaiko ny Ben’ny Tanàna voafidim-bahoaka ; tsy mahagaga noho izany raha mandeha amin’ny tsy falehany ny fiainam-pirenena satria any amin’ny zavatra tsy tokony idirany no tsabahan’ny olon’ny fanjakana. Ny mahafinaritra anefa dia tsy voarebirebin’ny mpanakorontana ny Malagasy ary heverina fa tsy hiova izany fahamatorana izany indrindra amin’izao mampanakaiky ny datim-pifidianana izao, sa ahoana hoy ianao ? Rina Rabemananjara
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Antananarivo, Lalao Ravalomanana, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa Vaovao. Ajoutez ce permalien à vos favoris.